“ ဒေါ်ငယ်လေးနဲ့ပဲတူတူနေမယ်” ( စ / ဆုံး ) – alanlaymyar
ကျွန်တော့်အဖေမှာ မောင်နှမတေ အများကြီးရှိတယ်…. အဲ့ထဲကမှ သူ့ညီမတစ်ယောက်ကတော့ အပျိုကြီးဗျ …. အသက်က ၃၈ လောက်ရှိပြီ …..အသက်သာကြ်ီးတာ လုံးကြီးပေါက်လှဗျ….. နို့တွေဆိုအကြီးကြီိး ဖင်ကြီးတွေလဲ အကားကြီး ခါးသိမ်သိမ်လေးနဲ့ ….. ဒီလောက် ဘော်ဒီတောင့်တဲ့ ဒေါ်ငယ်လေး ဘာကြောင့် ယောကျာင်္းမယူလဲ ကျွန်တော် မတွေးတတ်ဘူးးးးးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတော့ တစ်အိမ်တည်းတူတူ နေကြသေးတယ် ….. သူက အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့ ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့မြို့ကို ပြန်ရောက်လာပေမယ့် သူ့ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း တစ်အိမ် သပ်သပ်နေတယ် …… တစ်မြိုတည်းဆိုပေမယ့် နည်းနည်းဝေးတယ် …. ကျွန်တော်ကတော့ တော်ရုံ မရောက်ဖြစ်ပါဘူးသူ့ဆ်ီ….. လိုအပ်မှ …. အကြောင်းရှိမှ သွားဖြစ်တယ်…..အဖေကတော့ သူ့ညီမ အပျိုကြီးတစ်ယောက်တည်းနေတာဆိုပြီး ရုံးပိတ်ရက်တွေဆိုသွားသွားလည်တယ် မနက်ကတည်းကသွားရင် ညနေမှပြန်လာတတ်တယ် …. ကျွန်တော်ကတော့ လူငယ်သဘာဝဆိုတော့ ပျင်းလို့ လိုက်မသွားဘူး အဖေကလဲ မခေါ်ဘူး ….. အမေနဲ့ပဲ အဖော်လုပ်ပြီး အိမ်မှာပဲနေတယ် အမြဲတမ်း….. အခုလဲ ညနေစောင်းနေပြီ အဖေက “သား မင့်ဒေါ်ငယ်ဆီသွားပြ်ီး ဒီပစ္စည်းသွားပို့ပေးစမ်းပါ အဖေ ခရီးပန်းလာလို့ နောက်နေ့မှ လာမယ်လို့ပြောလိုက်ဦး” ဆိုတာနဲ့ အဖေပေးတဲ့ အထုတ်ဆွဲပြီး ထွက်လာတယ် ….. အဖေက ခရီးကပြန်လာတာဆိုတော့ ရှမ်းပြည်က ဒေသထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်မယ် ….. ညနေက မှောင်တောင်နေပြိ်ီဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ဒေါ်ငယ် အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ လူရိပ်မမြင်တာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ တံခါးဖွင့်ဝင်လာတယ်….. အပျိုကြီးဆိုတော့ အရေးအကြောင်းရှိရင် အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကို သော့အပို ပေးထားတယ်လေ …… အိမ်အပေါ်ထပ်လဲရောက်ရော …. သူ့အခန်းထဲက အသံအုပ် အုပ်လေး ကြားတော့ တံခါးလေးအသာဟပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တာ ….. လားးးးးးလားးးးးးး ဒေါ်ငယ်လေး လေ ဖင်တုံးလုံးကြီးနဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ လီးကြီးကို အားရပါးရ စုပ်နေတာဗျားးးးးးးး အဖိုးကြီးလို့ပြောတာ ဒေါ်ငယ်လေး ထက် ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်လောက် အသက်ပိုကြီးမယ့်ပုံမို့ …….. ဟိုလူကြီးလဲ လူကသာအသက်ကြီိးတာ အကြောက မသေဘူးဗျာ…. ဒေါ်ငယ်လေးခေါင်းကိုကိုင်ပြီး အောက်ကနေ ပင့်လိုးနေတာ ပါးစပ်ကို ….ဖင်ကြီးက တံခါးဘက်လှည့်နေတော့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ View က ရှယ်ကောင်းပေါ့ဗျာ ….. အခန်းထဲက အလင်းအားကလဲကောင်းတော့ သူလီးကုန်းစုပ်လိုက်တိုင်း နောက်ဖင်ကြီးလဲ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြီး ဆောက်ပတ်ကြိ်ီးအာနေတာပဲ….. ဒေါ်ငယ်လေးဆောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက ထူတယ်ဗျ …. အပြင်ကိုတော်တော် အဖတ်တေလန်နေတာတွေ့ရတယ် …… အညိုနုရောင် ဆောက်ပတ်အဖတ် အလန်တွေကြားမှာ ဆောက်ခေါင်းပေါက် ရဲရဲလေးလဲ ရှင်းနေတာပဲ….. ဆောက်ရည်တွေတတောက်တောက် ကျနေတယ်ဗျားးးးးးးး တော်တော် ထန်တဲ့ဒေါ်ငယ်လေးးး
ကျွန်တော့်မှာပြေးပြိ်ီိးကုန်းစုပ်ပေးချင်တာ မနည်းထိမ်းထားရတယ် …… ဖင်ပေါက်လေးကလဲ ပွစိ ပွစိနဲ့ ကျွန်တော့ကို စိန်ခေါ်နေသလိုပဲ …… လီးက အစွမ်းကုန်တောင်နေပြီ….. ကျွန်တော်လဲ သတိတရနဲ့ပဲ ပါလာတဲ့အထုတ်တေ မီးဖိုချောင်ထဲသွားထားပြီး အခန်းဝပြန်ရောက်တော့ တခါတည်း ဖုန်းထုတ်ပြိ်ီး Video ရိုက်လိုက်တယ် …… ” အားးးးးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ ငယ်လေးရယ်းးးးးးးး” သူကသာကောင်းနေတာ ဒေါ်ငယ်လေးက တအွတ်အွတ်နဲ့ လီးသီးနေပြီ ….. “အဟွတ်းးးးးးအွတ်းးးးးအားးးးးးး” “ကိုကြီးကသာကောင်းနေတာ ဒီမှာသေတော့မယ်……… သီးမယ့်တာသီးတာပါ ဟိုဘဲကြီးလီိးက ကျနော့ တစ်ဝက်တောင် မရှိဘူး သေးလဲသေး တိုလဲတိုသေးတယ် ……. ဒေါ်ငယ်လေးလဲ နောက်ထပ် အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ကြမ်းကြမ်းစုပ်ပေးရင်း ဟိုဘဲကြီးကော့တက်လာပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပြီးသွားတယ် ….. ဒေါ်ငယ်လေးလဲ လရည်တွေမြိုချပြီး ခဏ နားနေတုန်း
….. ဘဲကြီးက အဝတ်တွေထဝတ်တော့ ….. ကျွန်တော်လဲ ဖုန်းလေးပိတ် အခြေအနေလေးကြည့်နေတယ် ….. “ဟင်းးးးးးး ကိုကြိ်ီး ငယ်လေးကို မလိုးပေးတော့ဘူးလား” “Sorry ငယ်လေးရယ် နောက်နေ့ပေ့ါ ကိုကြိ်ီးခုညနေ အမျိုးသမီးနဲ့ သူ့မိဘအိမ်သွားဖို့ချိန်းထားတာ ပြီးတော့ ကိုကြီးလဲ ပြိုင်းသွားလို့ နောက်နေ့နော် ငယ်လေး” “တော်ပါ….. နောက်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့….. ဟွန်းးးးး” ဒေါ်ငယ်လေးစိတ်ဆိုးယောင် ပြပေမယ့် ဘဲကြီးက ထထွက်ဖို့ပြင်တာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ချောင်တနေရာ ပုန်းနေပြီး အခြေအနေကြည့်နေတယ် …. ဒေါ်ငယ်လေးကလိုက်မပို့ဘူးဗျာ…ဘဲကြီးက သူဘာသာ ခြံတံခါးဖွင့် ပြန်သွားတယ်…. “ဪးးးးးး သူလဲ သော့အပိုရှိတာကိုးးးးးး”
သူလဲပြန်သွားရော ကျွန်တော် ဒေါ်ငယ်လေးအခန်းကိုပြန်သွားကြည့်တော့ တံခါးဘက်ကျောပေးပြီး တုံးလုံးလေး လှဲနေတုန်း ……. အဲ့တာနဲ့ ကျတော်လဲ အခန်းထဲဝင် သူ့ဘေးနားလေး တင်ပလွှဲလေးထိုင်လိုက်တော့ ကုတင်အိကျသွားလို့နေမယ် …… ” ကိုကြီးးးးးး” ဆိုပြီးသူလှဲ့လာတယ် ……. ကျွန်တော် ဖြစ်နေတော့ သူအတော်လှန့်သွားပြီိး အို့တို့အန်းတန်းနဲ့ …… တဘက်လေး ရင်ဘတ်ပေါ်ဆွဲဖုံးရင်း “သူရ သားးးးးးးး ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ ….. ဘာလာလုပ်တာလဲ …..” တုန်တုန်ရီရီနဲ့ မေးတယ်……. ကျွန်တော်လဲ ခုဏက သူ့ဖင်ကြီး သူ့ဆောက်ပတ်ကြီး မြင်ကတည်းက လိုးချင်နေတာဆိုတော့ “ကြာပေါ့ ဒေါ်ငယ်လေးရယ်……အဖေက လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပို့ခိုင်းလို့ …… ဒေါ်ငယ်လေးတို့ ကောင်းခန်းရောက်နေတာနဲ့
သားက စောင့်နေတာ….. ခုက ဒေါ်ငယ်လေးဘဲကြီိးပြန်သွားပြီမို့လို့…… ဒါနဲ့နေပါဦး ဟိုဘဲကြီးက မိန်းမနဲ့လို့ပြောသွားတာကြားတယ် …. ဒေါ်ငယ်လေး သူ့ မယားငယ်လုပ်နေတာလားးးးးးးဒေါ်ငယ်လေးရယ် အဲ့လောက်ရှားးးးးလားဗျားးးး” ကျွန်တော့စကားတွေကြောင့် သူ့ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်ပြီိး မျက်ရေတေ ကျလာတယ် ” မဟုတ်ပါဘူးသားရယ်.
ဘဲကြီးမဟုတ်ရပါဘူး ….. ရုံးက ဦးစီးမှူးပါ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်တက်လမ်းအတွက် တချို့အရာတေ စတေးရတာပေါ့…….. ဒီအိမ်ကလဲ ရုံးက ပေးထားတာလေ….. အဲ့တာကြောင့်သူ့မှာ သော့အပိုရှိနေတာ ….. သူကသော့အပိုနဲ့ တိတ်တိတ်လေးဝင်လာပြိ်ီး ဒေါ်ငယ်လေးကို မတားရား ချုပ်လုပ်တော့ ကိုကလဲပြန်မပြောရဲ အော်လဲမအော်ရဲ ကို့ အရာရှိဆိုတော့ ….. ဟင့်…. ဟင့်…. ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီဘဝရောက်နေတာ …… ဟီးးးးးး” ဒေါ်ငယ်လေးလဲရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေတော့ ကျတော်လဲ သူ့ကို တယုတယလေးဖက် ကျောလေးကို ပွတ်ပြီးချော့နေတယ် ….. သူက ဘာအဝတ်မှပြန်မဝတ်ရသေးတော့ ကျောပွတ်ပေးရင်းကို လီိးအစွမ်းကုန်တောင်လာတယ် …… “ဘယ်နှကြိမ်လောက်ရှိပြီးလဲ သူအဲ့လိုလာလာလုပ်တာ” ” ၇ ကြိမ် ၈ ကြိမ်လောက်တော့ရှိပြီ ….” “အဲ့တာ သားတို့ကိုလဲ ဘာမှမပြော မတိုင်ပင်ဘူးကော” “သားရယ် ပြောလို့ကောင်းတဲ့ အရာမှမဟုတ်တာ …. ခုလဲ သားသိသွားတာတွေကို ဘယ်သူမှပြန်မပြောနဲ့နော် သားအဖေ ဒေါ်ငယ်လေးရဲ့ ကိုကြီးသိရင် ဘယ်ကနေတောင် အသက်ထွက်ရမလဲမသိဘူး သားဖေက သတ်မှာ….” “တိတ်…. တိတ် ငိုနဲ့တော့ ….. အလကား ဘာမှမဖြစ်ဘူး ကိုလဲ ပဲ့ပါသွားတာ မဟုတ်ဘူးးးးးး နောက်တခါတော့ ထပ်မဖြစ်နဲ့တော့ ….. အလကား ကလချာဘဲကြီး….. သူ့လီးက ဘာမှလဲမဟုတ်ဘူးးး လိုးလဲမလိုးပေးနိုင်ဘူး … အရည်တစ်ခါထွက်တာကို ပြိုင်းနေပြီ….. ဒေါ်ငယ်လေးဆောက်ပတ်နဲ့တောင် မတန်ဘူးးးးးးးး” သူလဲ အငိုတိတ်ပြီး ကျနော့စကားတွေကြောင့် ကြောင်ပြီး ကျတော့ကို မော့ကြည့်တယ် ……. “သားးးးး ဘယ်လိုတွေပြောနေတာလဲကွယ် ဒေါ်ငယ်လေးရှက်လိုက်တာ” “ခုမှတော့ ရှက်မနေနဲ့တော့ ခုဏက ဒေါ်ငယ်လေးဆန္ဒမပြည့်လိုက်ဘူးမလား သားဖြည့်ဆည်းပေးမယ် ဒီမှာလဲကြည့်ဦး” ဆိုပြီး ပုဆိုးအောက်က ထောင်ထနေတဲ့ ၇ လက်မ လီိးကြီးကိုပြဖို့ တခါတည်း ပုဆိုးဆွဲချွတ်ပြလိုက်တယ်…….. “အိုးးးးးးးသားရယ်…… ကြီးလိုက်တာကော…….. သားအဖေအတိုင်းပါပဲလားးးးး” “ဟင်…. ဒေါ်ငယ်လေးက အဖေ့လီး မြင်ဖူးတာလားးး” “မြင်လဲမြင်ဖူးတယ် ခံလဲခံဖူးတယ် မောင်နှမချင် မသင့်တော်လို့ မင်းအဖေက မင်းအမေကို ယူလိုက်တာ ငယ်ကတည်းက ဒေါ်ငယ်လေးတို့က လိုးနေကျ … ဒေါ်ငယ်လေးလဲ မင်းအဖေလိုးပေးမှုတွေ
အလိုးကောင်း အပြုစုကောင်းတာတွေကို သဘောကျပြီး ယောကျာင်္းလဲမယူတော့ဘဲ အပျိုကြီးလုပ်နေတာ နောက်မှ မင်းအမေတို့ရိပ်မိမှာစိုးလို့ အခုလို တစ်ယောက်တည်းနေနေတာ တစ်ယောက်တည်းနေတော့ ပိုလွတ်လပ်တယ်လေ အချိန်မရွေး လာလိုးရုံပဲ” ” ဪ….. ဒါကြောင့် အဖေက ဒေါ်ငယ်လေးဆီသွားရင် တစ်ယောက်တည်းသွားတတ်တာကိုးးးး ပြီးတော့ တစ်နေကုန် အကြာကြီးပဲ”
“ဟုတ်တယ် မင်းအဖေက ဒေါ်ငယ်လေးကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အရမ်းချစ်တာ တနေကုန်ကို လိုးတာ”
“အဖေနဲ့ ဒေါ်ငယ်လေး လိုးတဲ့ကိစ္စတွေ အေးဆေးမှမေးတော့မယ် …. လောလောဆယ် ဒီပြသနာ အရင်ရှင်းရအောင် ” ” ဒါပြသနာမှမဟုတ်တာ သားရယ် ဒါ ချစ်စရာ…… ဟင်းးးးးးး သားက ခုဏက သူများမယားငယ်လုပ်နေသလားမေးတယ် သူကမှ လင်ငယ် တကယ်လာအဖြစ်ခံနေတာ…. ဟားး ဟားးး” “လင်ငယ်ဖြစ်တော့လဲ ဘာဖြစ်လဲ အသေလိုးပစ်မယ် ….. နော် မယားကြီးးးးးး” “ဟုတ်ပါဘီ လင်ငယ်လေးရယ် …. လောလောဆယ် မယားကြီးဆောက်ပတ်ကို ယက်ပေးပါဦးးးး” “ယက်ချင်နေတာ ခုဏက လီးစုပ်ပေးနေတာကို ချောင်းကြည့်နေကတည်းက ဆောက်ပတ်ယက်ချင်နေတာ လာ ဖင်ကုန်းလိုက် လူက မှောက်အိပ်နေ ဖင်ကို အစွမ်းကုန် ထောင်ပြီး ဖြဲထား လက်နဲ့” ကျတော်လဲ ဆောင်ပတ် နှစ်ခြမ်း ဖြဲပြီး ဆောက်စိကနေ ဖင်ဝအထိ လျာအပြားလိုက် ယက်ပေးလိုက်တယ် “အားးးးးးးရှီး ကောင်းလိုက်တာ သားးးရယ်” ဆောက်စိလေးကို ချေပေးတယ် ဆောက်ခေါင်းပေါက်ထဲကို လက်နဲ့ထိုးထည့်ရင်း ဖင်ပေါက်လေးကို လျှာကျွေးနေတယ် ….. “ဖြန်းးးးးးးးး” ဖင်လုံးကြီးကိုရိုက်ချပစ်တယ် “အားးးးးးးးကောင်းလိုက်တာ နာနာလေးရိုက်ပါဦးးးးးး ဖင်ကိုလဲ လျှာနဲ့ လ်ိုးပေးပါဦးးးးးးးးးးးးးအားးးးးးးးးး ပြီးးးးးးးပြီ်းးးးးးးးးပြီ ထွက်ကုန်ပြီိးးးးးးးးးးးး” ဆိုပြီး …… ဆောက်ရည်တွေ သေးပန်းသလို ပန်းပြီးတော့ကို ပြီးတာ ရွှဲကနဲပဲ တဗြန်းဗြန်းနဲ့ကို ပန်းထုတ်တာ … ကျတော့လျှာကြော မျှောသွားပုံရတယ် …… ကျတော့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ဆောက်ရည်တွေရွှဲနစ်နေတာ ….. သူအမောဖြေနေတုန်း နောက်ကနေ လီးထိပ်နဲ့ ဆောက်ပတ်အဝကို လေးငါးဆယ်ချက်ပွတ်ပေးရင်း တဆုံး ဆောင့်ချပစ်တယ် ….. “အားးးးးးးခုပဲပြီးထားတာကို ပြန်ကောင်းလာပြန်ပြီ သားရယ် …… ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်လိုးပေးပါဦးးးးးး” “အင့်……. ရွှီးးးးးးးးး အားးးးးးး ဖတ်းးးးးဘတ်းးးးးး ကောင်းလိုက်တဲ့ဆောက်ပတ် အထဲကလဲ စုပ်စုပ်ပေးနေတာ …. လိုးလို့ကောင်းလိုက်တဲ့ဆောက်ပတ် ….” ကျွန်တော်လဲ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေပြောပြီးအသေလိုးခွဲပေးနေတာအချက် ငါးဆယ်လောက်ကျတော့ ဒေါ်ငယ်လေးနောက်တချီပြီးပြန်ရောဗျာ …. ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ခုဏကအတိုုင်း ဆောက်ရည်တွေ ရွှဲကနဲ ပန်းထုတ်ပြန်တယ် …… အဲ့တာနဲ့ လီးခဏချွတ်ပြီိးးးးး “ကောင်းလား ဒေါ်ငယ်လေးးးးး” “အသေကောင်းတာ သားရယ် သားအဖေခရီးထွက်နေတာကြာတော့ တော်တော်ဆာနေတာ ခုဏကလူကလဲ သားပြောသလို ကလချာလေ …… ဒါနဲ့သားမပြီးသေးဘူးမလား လိုးလေ ပြီးအောင်” “အင်း ခဏနားတာ အခု လီးလာစုပ်ပေးဦးးးးးးးး” ဆိုပြီး သူ့ မျက်နှာရှေ့ ကားယားလေးထိုင်ပြီး ကုတင်တိုင်ကို မှီပြီး လီးစုပ်ခံနေလိုက်တယ် …… “အားးးးးးးရှီိးးးးးးး ကောင်းတာ ဒါကြောင့် အဖေက စွဲနေတာကိုးးးးး” လီးဒစ်ကို ပတ်ပတ်လည် သေချာ လျှာလေးနဲ့ ရစ်ရစ်ြ့ပိ်ီးစုပ်တယ် …… လီးတစ်ချောင်းလုံးလည်ချောင်းထဲထိဝင်အောင်ငုံ ထားရင်း ခေါင်းကိုရမ်းပြီး စုပ်ပေးတယ် ….. ဂွင်းထုပေးရင်း လဥတေကို တစ်လုံးချင်း အောင့်နေအောင်စုပ်တယ် …… တခါတခါ ဖင်ပေါက်ကိုတောင် လှမ်းလှမ်း ယက်ပေးနေသေးတယ် …လီး အတံတစ်ခုလုံးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ညှပ်ပြီး ဖိပွတ်ပေးတယ်……. “အားးးးးးးးး ပြီိးသွားလိမ့်မယ် ထထ ဖင်ပြန်ထောင် ……” ဆိုပြီးးးးးးးးး ဖင်နှစ်ခြမ်းကိုဖြဲပြီး အာထွက်လာတဲ့ ဖင်ပေါက် နီညိုလေးကို တွံတွေးထွေးချလိုက်တယ် ….. “သားးးးးး ဖင်လိုးမလို့လားးးးး” “အင်းးးးးးးးးးဖင်ခံချင်နေတာမလားးးးးး ဖင်ပေါက်က ပွစိပွစိ ဖြစ်နေတယ် “…. “ဟုတ်တယ်သားးးးးးးး ဖင်အရမ်းခံချင်နေတာ မငြှာနဲ့နော် ကြမ်းကြမ်းပဲကြိုက်တယ် ကွဲချင်ကွဲပါစေ အသေလိုးပေးးးးးး” “ဒေါ်ငယ်လေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရမယ်….” “ဇွိ……. အားးးးးးး ဖင်ထဲ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ သားရယ် ကောင်းလိုက်တာ ခဏလောက် အဆုံးထိကပ် စိမ်ထားပေးဦးးးးးးးးးးး” ခဏကပ်ထားရင်း ဖင်ကိုရမ်းပြီး ညှောင့်ပေးနေတယ် “အားးးးးကောင်းလိုက်တာ ဗျာာာာာာာ သားမရတော့ဘူး ဆောင့်ချင်နေပြီိ” “ဆောင့်သား အားမနာနဲ့ ဆောင့် ” “အားးးးးးးရှီိးးးးးးးးးးး” “ပြွတ်းးးးးးးးးးဗွက်းးးးးးးးဗလွတ်းးးးးးးးးးးးး” “အားးးးးးးးးး” ကျွန်တော်လဲ အားမနာတမ်း ဆောင့်ခွဲပစ်တာ အချက်လေးဆယ်လောက်ကျတော့ …… “ပလွတ်းးးးးးးး” လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးးးးးးး “ဒေါ်ငယ်လေး ထ ခေါင်းမော့” ဆိုပြီး မျက်နှာပေါ် လရည်တွေ ပန်းချပေးလိုက်တယ် …… ဒေါ်ငယ်လေးလဲ ဆောက်ပတ်ကြီးကော့ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ဆောက်ရည် တွေ ပန်းထုတ်ပြီးနောက်တစ်ချီပြီးသွားပြန်တယ် …..
“အားးးးးးးကောင်းလိုက်တာဗျာာာာာာာ ကြိုက်လားးးးးးလရည်တွေ” “ကြိုက်တာပေါ့ ဘာလို့ ပါးစပ်ထဲ မထည့်ပေးလဲ ” “မျက်နှာပေါ်ကိုတမင် ချချင်လို့ ပိုဖီးလ်ရှိတယ်လေ မကြိုက်ဘူးလားး” “ကြိုက်တယ် နောက်လဲ မျက်နှာပေါ်မှာ လရည်တွေပန်းထုတ်ပေးးးးးး” …..
ကျတော်လဲ သူ့ကို ဆွဲဖက်ပြီိးအမောဖြေနေလိုက်တယ်….. “ဒေါ်ငယ်လေး သား ဒေါ်ငယ်လေးကိုအမြဲလိုးမယ် ပြီးတော့ ဒေါ်ငယ်လေးနဲ့ အဖေနဲ့ လိုးဖြစ်ကြတာတွေကို အစအဆုံးပြောပြရမယ် သားနားထောင်ချင်တယ် အဲ့တာက ဖီးလ်ပိုရှိ ပိုထန်စေတယ် ဘယ်လိုလဲ အဲတာတွေလိုက်လျောရင် ဒေါ်ငယ်လေးနဲ့ ဟိုဘဲကြီးကိစ္စဘယ်သူမှ မပြောဘူး …..ကတိ !!!!!” “အင်းပါ ဒေါ်ငယ်လေးလဲ သားနဲ့ အမြဲလိုးနေချင်ပါတယ် ဒီလိုလုပ် ဒေါ်ငယ်လေးက တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ညရေးညတာ ကြောက်ရတယ်ဆိုပြီိး သားအဖေကိုပြောပြီး သားကို ဒေါ်ငယ်လေးနဲ့ လာနေခိုင်းမယ် ဒါပေမယ့် သားအဖေလာရင် သားက ရှောင်ပေးရမယ်နော် အိုကေ ” ” အိုကေလေ ဟိုဘဲကြီးနဲ့တော့မလိုးရတော့ဘူးနော် ” ” အင်းပါ ကတိ !!!!!”
အဲ့နေကစပြီး ကျတော် ဒေါ်ငယ်လေးနဲ့ပဲအတူတူနေသွားတော့တယ် ……. တစ်ခုပဲ ကျွန်တော် Video ရိုက်ထားတာ သူမသိဘူး ကျတော်လဲ မပြောပြဘူးးးးးးးးးးး
Posted on October 10, 2019 Author alanlaymyar
မိုးရွာပြီးစ ညနေခင်းလေးတစ်ခုပါ။စိမ်းစိုနေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေကို လေနုအေးက ညင်ညင်သာသာ ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်နေတယ်။ ကောင်းကင်ပြာပေါ်မှာ ရောင်စုံသက်တန့် နဲ့ အားအင်ကုန်ခမ်းနေတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့အလှက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမို သစ်လွင်စေပါတယ်။လေညှင်း ရဲ့အေးမြတဲ့ ထိတွေ့ မှုကလည်း စိတ်ကို ကြည်နူးစေတာအမှန်ပါ။သာယာအေးမြတဲ့ ညနေလေးကို ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားစေတာကတော့ ချစ်သူရဲ့ အပြုံးလို့ ပြောရမှာပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ စ တွေ့ ဖြစ်တာ မွေးနေ့ ပွဲ တစ်ခုမှာပေါ့။ ညမီး အလင်းရောင်အောက်မှာ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ ထင်းနေအောင်လှပ တဲ့မိန်းကလေးကို ကျနော်မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိခဲ့တာ။သူကလည်း ကျွန်တော့် အကြည့်တွေကို ချက်ချင်း သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ရှေုးရေစက်ကောင်းမှုကြောင့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက်အများကြီး ငယ်တယ်ဗျ။ ကလေးပီပီ […]
Posted on October 10, 2019 October 10, 2019 Author alanlaymyar
“ဖြန်းးး!!!”လွှတ်စမ်း..ရသ နင်ငါ့ကို ခု လွှတ်…… ထူပူသွားတဲ့ ဘယ်ဘက်ပါးကြောင့် မမနဲ့ လူချင်းခွာပြီး ကျနော်အမြတ်တနိုးကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်နှာလေးကို ငေးရင်း…..။ နင် ငါ့ကို ဒီနေရာကို ချိန်းတာ ငါ့ကိုဖက်ပြီး ငါ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းဖို့လား?နင့်ရဲ့ အရေးတကြီး ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာ ဒါလားးးး? “မဟုတ်ဘူး မမ” မမနဲ့သန့်စင်ဆိုတဲ့ ဘီးကြဲ လက်ထပ်ဖို့တစ်ပတ်အလိုမှာ ကျနော့်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ မမကို ခနတဖြုတ်အဖြစ်တွေ့ခွင့်မရှိတော့ ဘူးလား? “ပြောစမ်းပါအုံး ဒေါ်စုစုမောင်” ငြိတွယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သံယောဇဉ် တွေက သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ကုန်တာလား၊အသွေးအသားတွေပုံအောပြီး ချစ်ခဲ့ရတာတွေက တိမ်ပေါ် အရုပ်ရေးသလိုလား? “ခင်ဗျား ဗျာ”ရက်စက်လွန်းမနေဘူးလား? စကားလုံးတွေကို နှုတ်ခမ်းဝမှ တရစပ်ဖွင့်ဟရင်း ကျနော့်ပါးပြင်ထက်ဆီမှာ မျက်ရည်တွေ စကျလာပြန်တယ်….။ “နေရာကား အထင်ကရနယ်မြေ အင်းလျားကန်ဘောင်” ထိုကန်ဘောင်ထက်မှာ အင်းလျားရေပြင်ကိုဘေးခိုင်းပြီး မျက်ရည်စတွေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်နေတဲ့ […]
ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တော့ ဆရာမ ရဲ့ ဖြူဝင်းနေတဲ့ ခြေသလုံးလေးတွေ ကို မြင်လိုက်ရ သည် . .။ ဆရာမ ၀ိုင်းစက်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ..နှာတန်လှလှလေး . .နှုတ်ခမ်းပြဲပြဲဖူးဖူးလေး..တွေ ဟာ သူ့ ရင်ကို တအားလှုပ်ရှားယစ်မူးစေ သည် လို့ ဆရာ ဦးသိန်းထွန်းနိုင် ထင် သည် . .။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည် ကျောင်းဆရာမ မလုပ်ဘဲ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး လုပ်ဖို့ကောင်း သည် လို့ ဆရာဦးသိန်းထနွ်းနိုင် ထင် သည် . .။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် သူတို့ ကျောင်း ကို ရောက်လာတာ မကြာသေး ။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် သည် ရုပ် က ချောသည် . […]
Total visitors : 32,508
Total page view: 115,354